AKOM-BAOVAO DRMRS AMORON’I MANIA : FIDINANA IFOTONY NATAON’NY MMRS TAO AMBOSITRA – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
17/05/2022 17/05/2022 SMLN
Nanatanteraka fidinana ifotony tao Ambositra, renivohitry ny Faritra Amoron’i Mania ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier tamin’ity faran’ny herinandro ity. Fidinana ifotony nijerena ny hahatomombana ny fanatanterahana ireo foto-drafitrasa tinapaka tao anatin’ny Filankevitry ny Minisitra mahakasika ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany, ny Alarobia 11 May 2022 lasa teo.
Ho fanatanterahana ny Velirano, araka ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina sy araka izay voafaritra ao anatin’ny Politika ankapoben’ny Fanjakana dia hirosoana ny fametrahana sy fampandehanana ireo Biraon’ny fitantanan-draharahan’ny harena an-kibon’ny tany amin’ny Faritra maromaro eto Madagasikara. Iray amin’ireo Faritra hametrahana izany ny any Amoron’i Mania.
Mazava ny paikady sy tanjona amin’ny fametrahana ireo biraon’ny fitantanan-draharahan’ny harena an-kibon’ny tany ireo, mizotra ho amin’ny seha-pihariana mirindra, matihanina ary manara-dalàna, mba hisitrahan’ny rehetra tombontsoa, fa indrindra ihany koa ho taratry ny Fanjakana manakaiky vahoaka, hanamorana ny famahana ny olan’ny mpisehatra eny ifotony.
Nararaotin’ny Minisitra tamin’izao fandalovany izao ny nihaona tamin’ireo mpiasa eo anivon’ny Fitaleavam-paritra DRMRS Amoron’i Mania, nifanakalozana sy nitondrana toromarika eo amin’ny lafiny arak’asa. Manana adidy ny tsirairay hahatongavana amin’ny tena fampandrosoana ity firenena ity. Nanentana ireo mpiasa ny tenany ary nanambarany fa lalan-tsaina tokony hifehy sy hijoroan’ny isam-batan’olona ho anjara biriky hametrahana zava-tsoa ho an’ny firenena, ny fahitsiana sy fahamarinana eo amin’ny fanatontosana ny asa ho an’ity Tanindrazana iombonana ity. Ho enti-manatanteraka izay asa izay dia notoloran’ny Minisitra solosaina ny teo anivon’ny Fitaleavam-paritra ho fampitaovana azy ireo.
📸Sary sy fampitam-baovao : DRMRS Amoron’i Mania
← FITSIDIHANA ARA-POMBA FIFANAJANA NATAON’NY MASOIVOHON’NY VONDRONA EOROPEANA GIOVANNI DI GIROLAMO TAMIN’NY MINISITRY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY RAKOTOMALALA HERINDRAINY OLIVIER
LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MINES DE MICA : RENCONTRE ENTRE L’ONG PACT MADAGASCAR ET LE MMRS →